Rasmi: Race 3 iyo Isniintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay – Filimside.net
Rasmi: Race 3 iyo Isniintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay
Filimka weyn Race 3 ayaa 35% hoos u dhac sameeyay Isniintiisa labaad wuxuuna keenay 2.75 Crore (Trade Figure) marka lala bar bar dhigo Jimcadiisii labaad ganacsiga uu sameeyay.
Race 3 mudo 11-maalmood ah wuxuu soo xareeyay 158.75 Crore (Trade Figure) waana ganacsi ka hooseeyo intii laga filaayay balse sida guud ah ganacsi wanaagsan inkastoo xili fasax weyn jiro la daawaday mashruucaan.
Sida muuqato Race 3 todobaadkiisa labaad wuxuu keeni doonaa 25 Crore taasi oo ka dhigi doonto mudo labo todobaad inuu soo xareeyo 165 Crore kadib wey kusii adkaan doontaa inuu ganacsi sii sameeyo madaama Hindiya oo dhan Jimcadaan la wareegi doono filimka weyn Sanju.
Race 3 wuxuu noqon doonaa Average ama Semi Hit waxayna natiijadiisa ku xirnaan doontaa sida uu todobaadkiisa sedexaad ganacsi u sameeyo inkastoo filimka Sanju masraxa oo dhan la wareegi doono sidaa darteed Race 3 u badi inuusan Average dhaafi doonin darajo ahaan.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Race 3 iyo mudo 11-maalmood ah ganacsiga uu sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Isniin labaad – 2.75 Crore
Todobaadka labaad – 18.75 Crore (mudo 4-maalmood ah)
Wadarta Guud – 158.77 Crore (Trade Figure)
Waxaa Aqrisay 588